Inona no dikan'ny S YIMG com? - Rakitra
Tena > Rakitra > Inona ny s.yimg - ny fomba fanamboarana
Inona ny s.yimg - ny fomba fanamboarana
Inona no dikan'ny S YIMG com?
s.yimg.com dia sehatra fananana sy ampiasain'i Yahoo. Tsy midika akory izany fa mety tsy hampiasa izany i Yahoo amin'ny script / sary fanarahana, fa ny fanakanana tanteraka azy io dia hanimba ny Yahoo ka tsy tena safidy io.14 Oktobra 2015
Fa maninona ry zalahy ary misy zavatra nolazaiko taminao tao amin'ny lahatsoratra farany nolazaiko anao fa nanana olana tamin'ny Pro Evolution Soccer aho.
Dia mbola toy izao ihany satria tsy nahavaha azy fa haiko ny mamaha azy. Edge yeah tsy maintsy manatona ny dadako aho ka raha ianao no nahazo an'ity kaody statut 82 3 tripleo dia niantso an'i sony aho ary nilaza tamiko izy ireo fa mila carte de crédit aho na dia maimaim-poana aza. Mila manana carte de crédit amin'ny kaonty Xbox Live aho, ka mandehana any amin'ny fikiranao ary avy eo midina any ny kaontinao ary mandehana any amin'ny safidinao ary ampidiro ny safidinao amin'ny fandoavam-bola ary hitondra anao amin'ity pejy ity ianao izay ahazoanao Playpal na ID iray. carte de crédit ary eny tokony handeha izy aorian'izay ka eny tsara fa tadidinao fa io fehezan-kaody io ihany no miasa
Inona no ampiasaina amin'ny YIMG COM?
Yimgcom dia solontena mahazatra an'ny sokajy hijacker browser ary toy izany, miasa ho toy ny fitaovana marketing izay mampiseho dokambarotra tohana amin'ny endrika pop-up, doka amin'ny sora-baventy, tolotra maro loko, ary bitsika tsindry izay matetika mankany amin'ny antoko fahatelo tranokala sy pejy fampiroboroboana ny doka.
Ny vaovao rehetra dia azo adika amin'ny fiteny Yang sy Yin.
Alan Watts Ny foto-kevitr'i Yin & Yang dia miorina amin'ny filozofia Taoista. Miseho amin'ny kolotsaina malaza sy ilain'ny mpanjifa izy io ary maneho zavatra toy ny fandanjana sy ny fandriampahalemana anaty. Fa ny pro lalina an'i yin sy yang dia mihoatra lavitra noho izany.
Raha tena azontsika tsara io filozofia miafina io dia afaka manova ny fomba fijerintsika an'izao rehetra izao mandrakizay. Ity lahatsoratra ity dia fiezahana hanazava ny dikany lalina amin'ny yin sy yang. Ny hevitra ao ambadiky ny yin sy yang dia karazana tsy fitovian-kevitra.
Ny mainty sy fotsy dia mijoro amin'ny hery mifanohitra roa izay mifameno koa. Io fisarihana sy fifandonana tsy tapaka io dia miteraka fanovana tsy tapaka izay miseho amin'ny antsointsika hoe izao rehetra izao. Ny phenomena toy ny fiainana sy ny fahafatesana, ny ririnina sy ny fahavaratra, ny zavatra ary ny fahabangana dia fisehoan'ny vatana yin sy yang.
Yin sy Yang dia azo adika ho hazavana-maizina na fieritreretana ratsy ary matetika resahin'i Lao Tzu Tao Te Ching ho lahy sy vavy, azontsika atao ny mahita azy miresaka momba ny vehivavy na ny reny lehibe, ny hery mifono mistery, mora mandray ary mandefitra. , izay soloin'ny tapany mainty amin'ny marika yin-yang, sy ny masculine, ny hery miasa, izay amin'ny ankapobeny no hita maso sy miharihary indrindra, soloin'ny faritra fotsy. Eny, tsy natao hanao firaisana izany. Ny teny hoe vehivavy dia fomba iray mamaritra ny toetra mampiavaka ny iray mifanohitra raha ny lahy kosa mamaritra ny iray hafa.
Ny lehilahy sy ny vehivavy dia samy manana ny toetrany ary ny toetra, izay hitan'ny psikology soisa Carl Jung ihany koa, izay niresaka momba ny lafiny lehilahy tsy mahatsiaro tena ny vehivavy - ny animus - ary ny lafiny vehivavy tsy mahatsiaro tena an'ny lehilahy - ny anima, mahita teboka mainty ao amin'ilay faritra fotsy sy teboka fotsy eo amin'ny faritra mainty, maneho ny fiheverana fa samy mitana ny tsirinaina ny lahy sy ny vavy. Ka inona ny fahasamihafana misy eo amin'i yin sy yang? Ary inona no azo antsoina hoe Yin sy W? azo raisina ho yang? Alohan'ny hanazavako izany dia zava-dehibe ny manamarika fa tsy misy soatoavina faratampony, inona ny tena yin na yang miankina amin'ny toe-javatra. Ity ny zavatra nosoratan'i Lao Tzu ao amin'ny Toko 2 ao amin'ny Tao Te Ching: ny tsirairay avy dia samy mamokatra.
Mifameno ny sarotra sy mora. Mifanazava ny lava sy ny fohy. Ny avo sy ny ambany dia mifanohitra.
Manaraka sy aoriana dia mifanara-dia. Teny farany. Ny ohatra omena tsirairay dia misy yin sy singa yang Samy mifameno ny yin sy ny Yang.
Yin dia maneho karazana kalitao izay - amin'ny ankapobeny - mandalo, foana, ambany, mangatsiaka ary maizina. Ny zavatra toa ny passivity sy ny fahabangana toa kely vidy, fa izy ireo kosa dia mitazona hery lehibe horesahiko vetivety. Azontsika faritana i Yang ho toy ny singa mavitrika sy masculine hita - amin'ny ankapobeny - amin'ny zavatra toy ny hazavana, hafanana, haavony, haben'ny, herisetra ary ny hafainganana Tao Te Ching, azontsika atao ny milaza fa ny ela dia noheverina ho Yang nefa lasa tsy raisina ho toy ny yin.
Ny maha-olona dia heverina ho yang, fa ny tsy maha-izy kosa dia toa yin. Ny iray tsy afaka misy raha tsy misy ny iray hafa, ary raha ianao na yin na yang dia miankina amin'ny fifandraisana misy eo amin'izy roa. Na dia toa miharihary aza ny fizotran'ny Yang, dia matetika no odian-tsy hita ny sandan'ny Yin, saingy misy hery lehibe ao anatiny.
Ohatra tsara amin'ity hery ity ny fiasan'ny mug. Ny lafiny yang ao anaty kaopy no fitaovana anaovana azy izay mety ho fitaovana mafy sy maina, inona no tena mahasoa ilay kaopy? Ny valiny dia: ny fahabangany. Raha tsy misy fahabangana, ny kaopy tsy afaka mitazona ranon-javatra.
Raha manana an'izany isika Mijery ny fahabangana amin'ity fomba ity dia ho hitantsika fa ampahany tsy miangatra amin'ny zavatra rehetra ataontsika izany; raha tsy misy ny fahabangan'ny habaka manodidina antsika dia tsy afaka mamely na mitifitra baolina kitra isika. Raha tsy misy fahabangana amin'ny feo dia tsy afaka miteny isika satria mila fiatoana hanavahana ny feo. Tsy afaka miditra amin'ny habaka tsy misy poaka isika ary raha tsy misy ny habaka poakaty eo amin'izao rehetra izao dia tsy hiasa ny rafitry ny masoandro.
Ny lafiny iray hafa amin'ny yin dia ny passivity. Ny fiaraha-monina dia mijery ambany amin'ny passivity. Io dia ny mavitrika, mahazo valiny, mandeha amin'ny teboka A mankany amin'ny teboka B, ary mandray fepetra hijanonana.
tsy afaka manafina folder
Noho io antony io, amin'ny ankapobeny isika dia tsy manaja ny singa mandalo amin'ny fiainana. Hafahafa izany rehefa mieritreritra izany isika, satria ny passivity dia tena ilaina amin'ny karazana fampisehoana. Raiso, ohatra, ny fanazaran-tena.
Ny hozatra dia tsy miorina ao amin'ny gym; Izy ireo dia miorina eo am-pandriana, eo amin'ny farafara, ary amin'ny toe-javatra rehetra izay tsy iasan'izy ireo hamela ny natiora hanangana indray ny hozatra mba hahafahan'izy ireo mihamatanjaka amin'ny fizarana manaraka. Toetra mampiavaka ny fahaiza-mandray yin Noho ny fahaizany mandray dia misarika. Hitanay io mavitrika io hatraiza hatraiza amin'ny natiora, manomboka amin'ny voninkazo miandry ho voaloton'ny bibikely, hatrany amin'ny vehivavy tsara tarehy eo amin'ny fisotroana miandry lehilahy hanao ny dingana voalohany, mankamin'ny lavaka mainty izay mipetraka fotsiny nefa tsy manatratra am-pahavitrihana, raha ny gravitational ny hery dia misintona izay rehetra manakaiky azy.
Lao Tzu dia mamaritra ihany koa i Yin ho malefaka rehefa mampitaha azy amin'ny rano amin'ny vatolampy mafy, izay ny lafiny Yang izay amin'ny lafiny rano. Ny Grand Canyon dia porofo fa maharesy ny mafy ny rano nefa tsy mikely aina. Etsy ankilany, yin dia tsy misy tsy misy yang.
Ny hafanana sy ny hazavana, ohatra, dia ilaina amin'ny fiainana, ary ny fahabangana dia tsy misy ilana azy raha tsy misy zavatra miorina manodidina azy ireo, mandoto, rehefa manakaiky ny bibikely ary manao izay tokony hataony. Fa raha mijery akaiky kokoa isika, dia hitantsika fa ny lafiny maha-lahy dia mitondra lafiny vehivavy foana amin'ny lafiny iray ary ny mifamadika amin'izany. Ohatra, ny tantely dia azo zahana ho fifandraisana yang-in amin'ilay voninkazo.
Saingy ny renitantely dia misy lafiny yin sy yang toy ny fahabangana mifanohitra amin'ny haben'ny, fiarovana amin'ny fanafintohinana ary ny tsy fitoviana amin'ny hetsika. Na dia samy mijery ny singa tsirairay ao amin'ny renitantely aza isika dia mahita endrika lahy sy vavy mandra-pahatongantsika any amin'ny haavon'ny atôma izay ahitantsika ny atiny voadidy tsara voahodidin'ny elektronika voadidy ratsy. Ny modely yin sy yang dia ny votoatin'ny kaody mimari-droa, izay misy ny 'zoro' sy 'zeros' fotsiny: Azonao atao ny milaza fa ny fomba fijerinao amin'ny fahasamihafana misy azy rehetra sy ny lokony rehetra dia mifangaro amin'ny kely 'Eny' ary kely 'tsia' misy.
Faran'ny teny nalaina. Raha mijery ny toetra mifameno amin'ny yin sy yang isika, dia hitantsika fa milaza fa samy mitazona tsara ny vehivavy sy ny lahy. Raha lasa manjakazaka loatra ny iray dia hitombo ny iray hafa mandra-pahatongany ho lehibe, ary avy eo hitombo ny ilany.
Ny iray amin'ireo ohatra mazava indrindra dia ny politika mandeha miankavia sy miankavanana, manomboka amin'ny mpandala ny nentin-drazana ka hatrany amin'ny liberal sns. Lao Tzu dia nanoratra fa tsy misy hetsika azo atao raha tsy efa nisy ny hetsika mifanohitra mialoha. Manonona aho: Raha mila zavatra miverina amin'ny loharano ianao dia avelao hanitatra izany aloha.
Raha te hampahalemy zavatra iray ianao dia tsy maintsy ataonao matanjaka aloha. Raha te hanala zavatra ianao dia avelao hiroborobo aloha. Raha te hanana zavatra iray ianao dia tsy maintsy omenao aloha.
Teny farany. Noho izany, azontsika atao ny milaza fa ny zava-drehetra dia fisehoan-javatra mifameno na angamba dihy eo amin'ny lahy sy vavy. Mifameno i Yin sy Yang, mifamorona, mifanampy, mifehy ary mifamadika.
Hitanay ity farany rehefa miteraka ny lahy sy ny vavy, ary b Ny fanakambana ny vavy sy ny lahy dia miteraka zaza, izay avy eo kosa dia misy yins sy yangs tsy tambo isaina. Yin sy Yang dia misy hatraiza hatraiza; amin'ny zavatra rehetra, ny zavamiaina velona rehetra, ny sela tsirairay ary ny singa tokana dia azo zaraina ho lahy sy vavy tsy misy fetra. Ny tsy fanaovana na ny fihetsika tsy misy ezaka, antsoina koa hoe Wu-Wei avy amin'ny Taoists, dia fomba fanao izay mampiasa ny herin'i yin sy.
mijinja izay, ny fikafika dia ny fahafantarana hoe rahoviana no hanao zavatra ary rehefa tsy izany ka ny asantsika tsy mavesatra fa amin'ny 'fanjakana mikoriana'. Izany dia mahatonga antsika hanaiky kokoa ny fizotran'ny natiora eo amin'izao rehetra izao amin'ny fanekena an'i yin, ary amin'ny tranga maro dia tsy ilaina ny hetsika. Mpivarotra be zotom-po izaitsizy no hampitahotra ny mpanjifa mety hitranga, ary ny sakaiza be fitiavana dia hampitahotra ilay lehilahy ifaneraserany.
Olana maro no mamaha ny tenany. Ankoatr'izay, ny fihetsika matetika dia vao mainka mampitombo ny toe-javatra. Amin'ny fisintahana dia miditra amin'ny fanjakana yin isika.
Ny lakileny dia ny fahalalana ny fotoana hisintonana ary rehefa tsy. Ny passivity be loatra dia mety ho ratsy toa ny kely loatra. Na inona na inona ataonao dia ho maizina foana ny zava-drehetra ary hanana lafiny mazava.
Ny sakafonao dia tsy matsiro fotsiny satria efa nanandrana naharikoriko ianao taloha. Tsara tarehy fotsiny ianao satria olon-kafa ratsy tarehy. Manankarena fotsiny ianao satria mahantra ny olon-kafa.
Noho izany dia mila ny sakafo feno ianao hankafizanao ny sakafo tsara, mila olona ratsy tarehy ianao ho tsara tarehy, ary mila ny manan-karena hanan-karena. Satria raha tsy misy ny mifanohitra amin'izany dia tsy misy afaka manohana ny toerana misy anao ao amin'ny ambaratonga ambony. Miaraka amin'ny fahalalana tsy manam-bola fa tsy misy ny olona raha tsy misy ny iray hafa, mety te-ho feno fankasitrahana bebe kokoa amin'ity mpiara-miasa ratsy ity isika, ilay lehilahy manapaka antsika amin'ny fifamoivoizana, ireo barbariana any amin'ny firenen-kafa misy kolotsaina sy finoana samy hafa ary ity mpivarotra rongony eny an-dalambe ity zoro.
Satria misaotra azy ireo isika afaka mijery fitaratra ka miteny hoe: “Olona tsara be aho” Misaotra nijery.
Ahoana no fomba hanesorako ny YIMG?
Azonao atao ny manomboka mitady ny hijacker amin'ny alàlan'ny fizahana ireo fampiharana napetraka. Manoro hevitra aho ny handamina ny daty napetraka, satria mety ho hitanao ny olana aorian'ny handraisan'ilay programa. Raha vantany vao hitanao ny programa tsy ilaina, kitiho eo aminy ary safidioesory.27 nov 2018
hey mac tia jonathan anio dia hasehoko anao ny fomba hanesorana ireo finday mpanafika ao amin'ny macbrowser dia misy endrika maro, ny ankamaroan'izy ireo dia mora ny mamantatra azy ireo satria mitondra ny moteranao amin'ny motera fikarohana avy amin'ny antoko fahatelo izay mbola tsy hitanao mihitsy naheno, ny virus Yahoo Redirect dia ara-dalàna tanteraka ary fantatry ny maro isan-karazany ny làlan'ny milina fikarohana toyahooa ny mpitety tranonkala anao dia hilaza aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny virus Yahoo redirect ary ny fomba fanesorana azy io ho tsara.
Inona ny viriosy Yahoo redirect? Voalohany, tsy viriosy velively izany, ara-teknika izy io dia mpangalatra browser izay mamily ny pejy fandraisan'nna sy ny motera fikarohana anao, maninona no Yahoo no tsy dia mahatsikaritra loatra ny malware ianao raha toa ka Yahoo! Ampiasao izy io ho toy ny pejy mbola tsy hitanao, fa ny zavatra azonao dia tsy ny valin'ny fikarohana Yahoo mahazatra, ny pejy rehetra dia tototry ny dokam-barotra manelingelina izay hamadika ny zavatra niainanao ho lasa nofy ratsy, fa ahoana kosa izany any ambony any Tonga ny Mac-nao? Eare Two Routes Yahoo Redirect dia mampiasa Tosneak amin'ny famandrihana solosaina ary ny fametahana malvertising dia mitranga rehefa misintona freeware ianao na mampiasa torrent downloaders. Izany dia hanome anao ny rindranasa tianao ampidinina miaraka amin'ireo malware izay niaraka taminy. Malvertising dia teknika iray ampiasaina hanehoana pop-up miaraka amin'ny filazam-baovao diso raha avy hatrany dia tsindrio ilay doka Have Installed Installed on Your Mac, fa ny Yahoo redirect dia tsy azo inoana fa miteraka fahavoazana lehibe eo amin'ny rafitry ny rafitra maninona no mbola mampidi-doza tokoa izany ao anatin'ny fotoana maharitra Malware afaka mampiadana ny rafitra ary mandany loharanon-karena CPU sy RAM be dia be Misy ihany koa ny mety hangalatra sy hanome ny mombamomba anao manokana? Ario ny virus Yahoo redirect miaraka amin'ny antoko fahatelo raha vantany vao hitanao izany, soa ihany fa tsio-drivotra ary hasehoko anao ny fomba anaovana azy tsikelikely dia hasehoko anao ny fomba mandeha ho azy haingana kokoa aloha, avy eo holazaiko ny fomba amboary yahooredirect amin'ny tanana Ny fomba famafana mora indrindra dia ny fampiasana fitaovana anti-malware voamarina amin'ny Apple hanadio ny mac xq hitsaboana haingana ireo viriosy mac-manokana, mila tsindry vitsivitsy handinihana ny Mac-nao, hanadio sy hanesorana ireo malware avy amin'ny Mac-nao x esory daholo fampiharana manimba.
Tsy hisy fiantraikany amin'ny fisie mifandraika amin'ny fahombiazan'ny rafitra io. Andramo diovina ny Mac ho rohy fampidinana maimaimpoana amin'ny famaritana eto ambany. Ity ny fomba fiasan'izy io, raha vantany vao nisintona sy nametraka cleanmymacx ianao, mandefa izany ary mankanesa any amin'ny Malware Removal ao amin'ny sidebar Click on Scan to start the detection process, the tool will scan your Mac for malware and show you the results once it's done Delete hanafoanana ny fandrahonana indray mandeha sy ho an'ny rehetra; tsara amin'ny filalaovana azy soa aman-tsara.
Alefaso ny monitor malware amin'ny ora tena izy. Tsindrio ny menio 'Clean up my Mac x', safidio Preferences ary safidio ny Fiarovana amin'ny fandrahonana rehetra eo an-toerana, raha aleonao esorina amin'ny tanana ny Yahooredirect dia tokony hiverina amin'ny tranokala default ianao. ampiasao amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany Hanomboka amin'ny Safari aho ary avy eo hasehoko anao ny fomba fiasan'izy io ao amin'ny Firefox sy Chrome Mandehana amin'ny menio Safari ary safidio ny Settings avy eo mifidiana Extensions Mitadiava extensions mifandraika amin'ny Yahoo Tsindrio ny Uninstall, vita indray, mankanesa any amin'ny tabilao ankapobeny ary ovao ilay pejy fandraisam-bahiny amin'ilay tianao. Farany mandehana amin'ny takelaka fikarohana. Safidio ny motera fikarohana tianao hampiasaina, ny tiako dia Google.
Fotoana izao hanesorana ireo fanitarana mampiahiahy avy amin'ny Firefox. Atombohy aloha ny tsipika Firefox amin'ny tsipika adiresy ity tsipika ity ary tsindrio enter Azonao atao ny mandika azy avy amin'ny saha famaritana. Raha manana ianao dia tadiavo ireo fanitarana izay tsy tokony ho eo. Tsindrio ireo teboka telo eo akaikiny ary kitiho ny Delete Ampidiro ity ao amin'ny bara adiresyHahitanao ihany koa ity baiko ity amin'ny famaritana Hitondra anao any amin'ny toerana fitetezanao, izay toerana afaka manova ny pejy fandraisam-bahiny sy ny motera fikarohana Select Homepage mba hanaovana ny pejy fandraisam-bahiny ary avy eo mandehana any amin'ny Fikarohana hisafidianana ny motera fikarohana nataonao, aorian'ny nahavitana azy, avereno amin'ny laoniny ny browser Chrome anao.
Ity ny torolàlana momba ny fandefasana ny Chrome mivadika mankany amin'ny tsinontsinona Chrome mandroso mandroso slashextensions mandroso fotsiny. Alao ity baiko ity avy eo amin'ny sahan'ny famaritana ary apetaho ao amin'ny bara adiresinao, azonao atao ihany koa ny manindry ny kisary telo teboka eo ankavanan'ny tranokalaninao ary mahazoa natomboka tamin'ny fitaovana misimisy kokoa dia fidio ny Extensions, noho izany eto ny lisitry ny extension Chrome anao ary tadiavo ireo izay tsy tianao apetraka. Tsindrio Esory eo akaikiny. Tsara izao, ampidiro ity tsipika ity handehanana amin'ny takelaka fanovana, amin'ny fanombohana dia fidio eo amin'ny sisim-baravarana hametrahana ny pejy fandraisam-bahiny tianao, avy eo mankanesa any amin'ny tabilaon'ny motera fikarohana ary safidio izay tianao hampiasaina, rehefa vitanao ireo dingana rehetra ireo. Raha toa ka tsy manam-potoana hanesorana amin'ny tanana ny Yahooredirect isaky ny mpitety ianao dia azonao atao ny manandrana mamerina safarifireoks amin'ny cleanmymac x, na manomboka Chrome cleanmymacx, ary safidio ilay uninstaller ao amin'ny sidebar, tadiavo ilay browser tianao hamerina ao amin'ny lisitry ny fampiharana, kitiho ny zana-tsipìka eo akaikin'ny deinstallland ary safidio ny reset avy amin'ny menio ary tsindrio indray izao ny fanamorianao ary toy ny vaovao indray ny browser anao mba hamerenanao ny safarianao mba hanomezana fidirana cleanmymacx mankany amin'ireo rindranasa mankany amin'ny settingmy cleanmymac x ary safidio tsy hiraharaha - Tanisao ny famafana tahaka ny ataonao amin'ireo magazay mpitety tranonkala hafa, nanampy ity lahatsoratra ity.
mailaka dia miadana
Jereo ny famaritana ny rohy sy ny antsipiriany fanampiny
Inona no tanjon'ny s.yimg.com?
S.yimg.com dia mpangalatra mpijery izay afaka miditra amin'ny rafitra Windows ary manova ny toe-javatra misy an'ireo mpitety napetrakao. Mety hampiroborobo azy io ho fitaovana fikarohana mahasoa izay tohanan'ny motera fikarohana ara-dalàna toa an'i Google, Bing na Yahoo, saingy tsy izany no izy. Ny tena tanjon'ilay hijacker dia ny manome anao atiny ara-barotra.
Misy fomba manala ny s.yimg.com?
Noho ireo antony ireo dia manoro hevitra anao mafy izahay hamafa ny S.yimg.com. Ny fomba tsotra indrindra hanafoanana ny S.yimg.com dia ny fampiasana rindranasa famongorana. Afaka manafoana ny S.yimg.com tsy misy fahasarotana be. Amin'ny alàlan'ny tanana S.yimg.com ny fanesorana dia azo atao ihany koa raha toa ka manao izany ianao raha tsy maniry hampiasa azy io.
Inona no iankinan'ny yimg ao amin'ny Yahoo Buzz?
Yimg.com dia sehatra iray izay ampiasain'ny yahoo buzz. Orinasa widget ary ampahany amin'ny tranokala tambajotra sy teknolojia hafa ampiasaina amin'ny fanarahan-dalàna ataon'ny mpampiasa. Ilaina ihany koa ny mijery ireo hevitra ao ambanin'ny lahatsoratra Yahoo News.
Misy mahasamihafa ny yimg sy ytimg?
yimg dia misy tokoa ary angamba indraindray te-hampiditra amin'ny youtube izy (mety ho avy amin'ny dokambarotra na aiza na aiza), fa ny yimg sy ny ytimg dia zavatra tsy mitovy mihitsy, ity farany dia te-hitondra entana foana rehefa mitsidika youtube ianao. ytimg tsy tokony nanakorontana na inona na inona, azo antoka ihany. yimg, tsy fantatro manokana izany.